Free Escape EA Lite - Best Forex EA | Expert Advisors | FX Robots
HomeFree Forex EAsFree Escape EA Lite
Izany dia dikan-teny malalaka Mialà EA miaraka amina fetra voafetra amin'ny 0.03. Ny rafitra varotra dia mifototra amin'ny fisondrotan'ny vidin'ny vidiny. Ny fampidiran-tsoratra input dia ahafahanao manara-maso ny sehatry ny varotra amin'ny fotoana samy hafa. The Forex Expert Mpanolotsaina dia azo ampiasaina ho toy ny scalper ary ho an'ny varotra mampiasa ny haavony. Mialà EA dia tsy mampiasa endriky sy teknika tena izy, toy ny martingale, varotra, fametahana, sns.
Mba hanokafana ny fifanarahana dia mametraka ny EA mbola miandry baiko eo amin'ny sehatry ny fandaharana amin'ny fotoana voatondro. Ny baikon'ny tsirairay dia manana tombony ary miaro amin'ny fiatoana. Raha tapaka ny sisin-tany ny vidiny alohan'ny fotoana fametrahana ny baiko, dia tsy hisy baiko hibaiko an'io lalana io.
Mba hampitomboana ny tombombarotra sy hampihenana ny fatiantoka dia azo atao ny mampiasa fijanonana farany. Ny EA dia manana rafitra fitantanam-bola manara-penitra: afaka mampiasa faran-tsokona, automatique lot (miankina amin'ny habetsahan'ilay tahiry) ary mamaritra betsaka (arakaraky ny habetsahan'ny risika), izay ahafahanao mifehy tanteraka ny fahavoazana mety.
Ho an'ny vokatra tsara indrindra amin'ny fomba fanala scalping, dia tokony hampiasaina amin'ny kaonty ECN amin'ny famoahana ny famandrihana mafy sy ny famerenana ny baikon'ny fifadian-kanina, ny VPS haingana, ary koa ny asa fanolorana.
Free Escape EA Lite - mpampiasa fidirana
MagicId - ny ID tokana avy amin'ny Expert Advisor.
RangePeriod - fe-potoana hamaritana ny haben'ny fandaharana (ambony sy ambany).
RangeSize - Fandefasana sehatra (isa RangePeriod vanim-potoana).
RangeMaxRatio, RangeMinRatio - ny farafaharatsiny farafahakeliny sy farafaharatsiny indrindra amin'ny faran'ny seha-pifaneraserana mankany amin'ny salan'isa amin'ny faran'ny 50 farany (ohatra RangeMaxRatio= 0.6 dia midika fa ny haben'ny sehatra dia tokony ho latsaky ny 60% amin'ny salam-paritra).
ColdStart - fametrahana (marina) eo amin'ny fanombohana ny baikon'ny EA na fanombohana indray, miandry ny fotoana fanokafana (diso).
HS, MS - fotoana (ora sy minus) hametrahana baiko am-bava.
HE, ME - ny fotoana (ora sy ny minus) hamafa ny baiko am-bavany na ny famaranana ny baiko misokatra.
MaxLot - fara fahakeliny ny lamina iray (napetraka amin'ny 0.03 amin'ity dikan-teny ity).
MainLot - Sarobidy ny lanjany (ho an'ny LotManual maody).
LotType - varim-pifidianana.
LotManual - Ny filaharan'ny loka dia mitovy MainLot.
LotRisk - Maro no voaisa amin'ny tahan'ny risika FactorRisk.
LotAuto - Maro no miankina amin'ny fitantanana ny kaonty ary FactorAuto.
FactorRisk - fatiantoka avo lenta isan-karazany,% of AccountEquity.
FactorAuto - AccountEquity isaky ny tsirairay MainLot.
Unit - mifidiana singa ho an'ny Stoploss ary Takeprofit:
Percents -% amin'ny fandaharana fantsona (ho an'ny Order Stop Order: 0% no faritry ny sehatry ny fantsona, 100% no sisintany ambony, mifanohitra amin'ny Order Sell Stop).
Takeprofit - maka tombombarotra.
Stoploss - Atsaharo ny lanjany.
tanatin ' - manaova (On) na manafoana (Off) ny fijanonan'ny fiatoana.
TrailStart - maromaro avy amin'ny lamosina fanokafana mba hampiasana ny fijanonana farany.
TrailStop - ny isa ambony indrindra amin'ny vidiny mankany amin'ny fihenan'ny fiatoana amin'ny fijanonana farany.
ShiftUp - Ny fametrahana lamin'asa mifandray amin'ny faritry ny lakandrana ambony (> 0 midika ny sisintany, <0 midika ny sisin-tany), amin'ny pips.
ShiftDn - Ny fametrahana lamin'asa mifandray amin'ny faritry ny lakandrana ambany (> 0 midika ny sisin-tany, <0 midika ny sisintany), amin'ny pips.
ShowInfo - asehoy (marina) na manafina (diso) ny tontolon'ny fampahalalam-baovao (azo esorina ny fanesorana ny tontonana mandritra ny fanandramana sy fanatsarana).
InfoFontColor, InfoFontSize - ny loko sy ny haben'ilay lahatsoratra aseho eo amin'ny tontolon'ny info.
ShowRange - manaova (marina) na manafoana (diso) ny fampisehoana amin'ny sehatr'asa sy ny Fibonacci (mety tsara ny manala ny sivana mandritra ny fanandramana sy fanatsarana).
RangeColor - ny lokon'ny fantsona sy ny haavon'ny Fibonacci.
fanovana ny fametrahana relatif